Le chip entsha yeRRAM iyakwazi ukuqhubekeka kunye nokugcina idatha | Iindaba zeGajethi
Uninzi lwabaphandi kunye nabaphathi beenkampani ezahlukeneyo abangadinwayo ukuphawula, nanini na xa benethuba, lokuba namhlanje abantu banakho ukuvelisa ulwazi oluninzi kangangokuba iinkqubo zangoku zokugcina, okanye iiprosesa, banokuphelelwa lixesha kungekudala kunokuba sinokucinga Ngenxa yoko, ngokuchanekileyo, kwiimfuno kancinci kancinci esinazo ngaphandle kokuyiqonda.
Ngenxa yoku, ayothusi into yokuba, ngelixa inkxaso-mali yophando enokusombulula ezi ntlobo zeengxaki ngokubetha, njenge ubungakanani beekhompyuter okanye ufumane idatha kwi Imicu yeDNA, into enokuthatha ixesha elide ukuba ibe yitekhnoloji esinokuyisebenzisa sonke, kufuneka siqhubeke nokusebenza kwi ukuvela kweendlela ezikhoyo.
1 Le chip entsha ye-ReRAM yamkelwe njengenye yeenkqubo ezinobunzima be-nanoelectric kwiplanethi
2 I-chip ye-RERAM inokuphinda kabini amandla eprosesa yangoku
Le chip entsha ye-ReRAM yamkelwe njengenye yeenkqubo ezinobunzima be-nanoelectric kwiplanethi
Ngenxa yoku ayothusi into yokuba, kwangaxeshanye kwi IZiko leTekhnoloji laseMassachusetts (MIT) Umsebenzi uyenziwa kuphuhliso lweendlela ezintsha zombini zekhompyuter ye-quantum kunye nokukwazi ukugcina idatha kwi-DNA, ukunika umzekelo ngeeprojekthi ezimbini ezisebenza kuzo namhlanje, intsebenziswano ikwafunwa ukuguqula ubuchwephesha bangoku inokuba yimeko yendlela entsha yokwakha i-chip IRAMI ye-3D ezisandula ukubhengezwa kwaye ezifuna intsebenziswano yazo University of Stanford.
Okwangoku, mhlawumbi kufuneka sime kancinci kwaye sichaze okomzuzwana ngokuchanekileyo ukuba iyintoni na i-chip ye-ReRAM, into eseyinkqubo elandelayo yesizukulwana esithathu Amandla ekhompyuter adityaniswa namathuba okugcina kwiyunithi enye. Ezi chips zintsha zenziwe zisebenzisa i-carbon nanotube transistors endaweni yokusebenzisa i-silicon yesiko.
Nje ukuba oku kucace, kuyacaca ukuba kulula kuthi ukuqonda ngokuthe ngqo ukuba yintoni, ngokuqinisekileyo, umsebenzi oncomekayo owenziwe ngabaphandi kunye neenjineli kuzo zombini i-MIT kunye neYunivesithi yaseStanford, umsebenzi odlulayo ngokudibanisa ngaphezulu kwesibini isigidi se-transistors kunye nesisigidi esinye seeseli ze-RRAM kwi-chip efanayo, ukufezekisa, njengoko sele kubizwa njalo, ukuphuhlisa Enye yeendlela ezintsonkothileyo zombane kwiplanethi yethu.
Obu buchwephesha butsha bunokuchaphazela iikhompyuter esizisebenzisa mihla le ngeendlela ezininzi, umzekelo kumakhaya ethu okanye eziofisini ukusukela, njengoko usazi, Ngokwesiqhelo imemori kunye neetshipsi zokwenza idatha zahlukile. Ngenxa ngqo yale ngxaki kuyilo lwangoku sizifumana sesinye sezona ngxaki zibalaseleyo zeekhompyuter zethu kuba unokuba nenkumbulo elungileyo kakhulu kunye neprosesa enentsebenzo eninzi oya kuhlala uxhomekeke kunxibelelwano olukhoyo phakathi kokubini , kuko konke xa ufuna ukucwangcisa ulwazi oluninzi kwaye kuya kufuneka uthathe inani elikhulu ledatha ukusuka kwindawo yayo yokugcina ukuya apho ufuna ukuyilungisa khona kwaye emva koko ubuyisele iziphumo.
I-chip ye-RERAM inokuphinda kabini amandla eprosesa yangoku
Njengoko uya kucinga ngokuqinisekileyo, enkosi ekusebenziseni iitshipsi ezintsha zeRAM sibususa ubunzima ekuphatheni izixa ezikhulu zedatha kuba yonke into isendaweni enye. Esona siphumo sikhawulezileyo koku kukuba, njengoko sele kubonisiwe kwizifundo ezahlukeneyo, sigcina ixesha elininzi kudluliso lwedatha ukuze isantya seprosesa sinokuphinda kabini.
Ukuthobela amazwi I-Subhasish Miltra, Unjingalwazi kwiYunivesithi yaseStanford kunye nomnye wabantu abaphethe le projekthi:
Uyilo olutsha lwe-3D lubonelela ngokudityaniswa okuqinileyo phakathi kokucwangciswa kwedatha kunye nokugcinwa, ukoyisa kakhulu iibhotile ezenzeka xa uhambisa idatha phakathi kweetshipsi.
Ngenxa yoko, i-chip iyakwazi ukugcina isixa esikhulu sedatha kunye nokwenza imisebenzi eyimfuneko yokuyiguqula ibe lulwazi oluluncedo.
Okomzuzu inyani isekhona Kukho ixesha elide de le teknoloji intsha ifikelele kumakhaya ethu. Okwangoku, njengoko iqela elijongene nale nkqubela phambili lithe laxubusha, bagxile ekuphuhliseni iinguqulelo ezintsha zenkqubo ezisebenzisa ngokupheleleyo amandla okwenza ubhaqo lwedatha kunye nokusebenza kwichip efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » isibulali » Le chip entsha yeRRAM iyakwazi ukuqhubekeka kunye nokugcina idatha
Nge-23 ka-Agasti iqinisekisiwe njengomhla wenkcazo ye-Galaxy Note 8